सञ्चय कोषको जलविद्युतमा ३४ अर्ब लगानी - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
सञ्चय कोषको जलविद्युतमा ३४ अर्ब लगानी
पुष २५, २०७४ 3520 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
देशमा सबैभन्दा बढी २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी रहेको गैरबैंकिङ संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषले हालसम्म जलविद्युत् विकासमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कोषले ऋण र सेयर गरी उक्त लगानी पुर्याएको हो ।
याे अवधिमा सिंगाे बैंक-वित्तीय क्षेत्रले जलविद्युत्मा जम्मा साढे ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकाे छ । यसकाे तुलनामा काेषले अाफ्नाे लगानी निकै विस्तार गरेकाे हाे ।
कोषले ८ जलविद्युत् आयोजनामा २८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण र विद्युत्सँग सम्बन्धित ३ कम्पनीमा ६ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनीमा सेयर लगानी गरेको छ ।
कोषका अनुसार जलविद्युत् कम्पनीमा १ अर्ब, विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा २ अर्ब र बेतन कर्णालीमा ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर छ । यस्तै, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी तथा यसले सञ्चालन गरेका ४ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसीमा ऋण लगानी गरेको छ ।
कोषले २०५६ मंसिर १७ गते २२ मेगावाटको चिलिमे आयोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको निर्णय गरेको थियो । यसपछि साढे ७ मेगावाटको सुनकोसी निर्माण गरेको नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीमा २० करोड रुपैयाँ र डेढ मेगावाटको चाकु खोलामा ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।
यसैगरी, चिलिमे कम्पनीले अघि बढाएका १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र ५३ मेगावाटको सान्जेनमा १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । उता ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।
हालसम्म प्रतिबद्धता गरेको ऋणमध्ये ३ चिलिमे, नेशनल हाइड्रो र चाकुले कोषको ऋण चुक्ता गरिसकेका छन् । बाँकी ५ आयोजना निर्माणाधीन छन् । कूल ऋण दिन प्रतिबद्धता गरेको रकममध्ये कोषले १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यसअवधिमा ती आयोजनाबाट ९७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सावाँ फिर्ता भएको कोषले जनाएको छ ।
कोषमा ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता छन् । आगामी ५ वर्षमा १० लाख सञ्चयकर्ता पुर्याउने कोषको लक्ष्य छ । त्यतिबेलासम्म वित्तीय आकार ७ खर्ब रुपैयाँको हुने कोषको दाबी छ ।